Hiran State - News: HS:- Wararkii ugu danbeyey siyaasada Somaliya:Mahiga Shirkii Garoowe dib ayu u dhacay Somalilana in la aqoonsado ayey u qalantaa.
HS:- Wararkii ugu danbeyey siyaasada Somaliya:Mahiga Shirkii Garoowe dib ayu u dhacay Somalilana in la aqoonsado ayey u qalantaa.
HS:-Mahiga Shirkii Garoowe dib ayuu u dhacay Somalilana in la aqoonsado ayey u qalantaa, taasi oo lagu macneeyey Roadmap warkiis ma jiro.
Wakiilka QM ee Somaliya A Mahiga ayaa shir jaraa'id ku sheegay in dib loo dhigay ilaa mudo shirkii wadatashiga ee lagu waday inuu ka dhaco magaalada Garoowe 9ka bishani aynu ku jirno iyadoo dib u dhacaan lagu micneeyey mudanayasha baarlamanka oo siweyn ugu soo horjeedo inba shir lagu qabto meel ka baxsan Mogdisho, sidaasi ay tahay waxeyba ka soo horjeedeen shirkii kan ka horeyey ee lagu qabtay xarunta Amisom ee Xalane.
Mahiga oo aad uga careysan qilaafka aan dhamadka laheyn ee TFGda oo mid marka la xaliyo mid kale soo shaac baxayo hadane waxuu hada u ololeynayaa beesha caalamkane ku dhiiragelinayaa in Somaliland la aqoonsado maadama uu hada Mahiga ogyahay in shirar weyn oo Somalida loo qabanayo ay jidka ku soo jiraan.
Sida muuqata waxaa mugdi ku jira shirkii la doonayey in lagu qabto magaalada Garoowe bishani aynu ku jirno horaanteeda. Mahiga aqoonsiga uu hada Somaliland u raadinayo ayaa shaki badan la galinayaa maadama wadanka Somaliya laga saarayo xiligii kumeel gaarka ahaa mudo dhawr bilood kadib.Si kastaba howsha QM ayaa ah marka wakiilkeedaa arko inuu fashilmay inuu arin laga doonayey inuu mar hore ka howl galo ka dhawaajiya xili ay xeero iyo faldhaan kala dhacaan.
Waxaanu sugnaaba waa maamulka Puntland oo mudo u diyaar garoobayey shirkaan waxa lagu qanciyo dhaqaale amaba in sidaa looga tago.
Shirka Garoowe waxaa dabada ka riixayo oo kaliya R/wasaare Gaas inkastoo gudoomiyaha baarlamanka hada culeys u gaar ah ka heysto mudanaashii uu madaxda u ahaa madaxweyne Shariifna qorshaha ugumaba jirto waayo markii uu ka soo horjeestay soo gelitaankii ciidamada Kenya R/wasaare C/wali isagoo ku xumeynayo soo dhaweeyo taasi oo laga yaabo in Shariifka kaka aar guto arintaan.
Fikirka C/wali Gaas iyo maamulka Puntland.
C/wali Gaas iyo maamulka Puntland waxa ka dhadhacsan in shacabka Koofurta Somaliya ay yahiin dad aan is xakumi karin aqoon duruqsana u laheyn dowladnimada marka si ay aduunyada u tusiyaan iney yahiin dadkii siyaasada Somaliya waligood soo maamulayey waxey doonayan iney taariikhda u gasho iney Somalida koofur degta iskugu keeneen degaankooda kadibna dhawr maalmood marka halkaas leysku masawiro in la aado shir weynaha ka dhici doona Lodon ee ay marti galisay dowlada Britian.
Si kastaba dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee hada ka socda dibada iyo shriarka soo socda waxuu tusaale u yahay marxalada kala guurka iyo in Somaliya loo helo dowlad rasmi ah.
· admin on December 05 2011 12:09:03 · 0 Comments · 1718 Reads ·
14,614,177 unique visits